Ciidamadii jabhadda TPLF oo bilaabay inay ku qaxaan dalka Suudaan magangelyana waydiistey dalkaasi. | SMC
Home WARARKA MAANTA Ciidamadii jabhadda TPLF oo bilaabay inay ku qaxaan dalka Suudaan magangelyana waydiistey...
Ciidamadii jabhadda TPLF oo bilaabay inay ku qaxaan dalka Suudaan magangelyana waydiistey dalkaasi.
Boqolaal katirsan ciidamada hubaysan ee ka dagaalamaya gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa bilaabay inay saacadihii la soo dhaafay u qaxaan gudaha dalka Itoobiya iyagoo ka cararaya duulaanka ciidamada federalka ee dalkaasi.
Dagaallada rabshadaha wata ee udhaxeeya ciidanka Itoobiya iyo dagaalyahanada Tigreega ayaa sababay in kumanaan katirsan ciidamada Itoobiya ay u cararaan dhanka xuduuda Akkadi ee Suudaan.
Warbaahinta dalka Eriteeriya ayaa werinaysa in ciidankaan katirsanaa TPLF ay ka codsadeen ilaalin ciidamada Suudaan waxayna codsadeen in loo fasaxo inay soo galaan gobolka Suudaan ee Gedaref.
Magaalada Humara oo kutala xadka u dhaxeeya Tigrei & Sudan ayaa dhowaan dowladda federalku sheegtay inay qabsatay waxaana ay soo bandhigtay garoonkiin diyaaradaha magaaladaasi oo la sheegay inay kala wareegtey jabhadda TPLF.
Arrintaan ayaa ku soo beegmaysa xilli Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu balan qaaday inay soo afmeeri doonaan dhaqdhaqaaqyada Tigreega oo uu sheegay inay doonayaan inay xoog ku maamulaan dalkaasi.
Previous articleVilla Soomaaliya oo ku fara-adeegaysa guddiyada doorasho ee qaadacay
Next articleDowladda Oo Sheegtay in Howlgalo laga fuliyay bubbada hoose Ay Ku Dileen Horjoogayaal Al-Shabaab Ah